LFW သည်ထူးခြားသောအရာများဖြစ်သည်! LAKME ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်၏ထိပ်တန်းအဆိုးဆုံးဗီရိုအချိန်များ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ဖက်ရှင်
LFW သည်ထူးခြားသောအရာများဖြစ်သည်! Lakme ဖက်ရှင်ရက်သတ္တပတ်၏ထိပ်တန်းအဆိုးဆုံးဗီရိုအချိန်များ
နေအိမ် ဖက်ရှင် ဘောလီးဝုဒ်ဗီရို ဘောလီးဝုဒ်ဗီရို Dona အားဖြင့် Dona Dey | ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2018 ရက်တွင် Lakme Fashion Week 2018 - LFW မှထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခြင်းများ | Boldsky
Lakme Fashion Week နွေရာသီအပန်းဖြေစခန်း ၂၀၁၈ ကိုစတင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လှည့်ကြည့်ပါကဤအဖြစ်အပျက်၌ဗီရိုချွတ်ယွင်းမှုများများစွာရှိသည်။ နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဖက်ရှင်ပြပွဲသည်ဤသို့သောရှက်စရာကောင်းသည့်အချက်များမှလွဲ။ မရခဲ့ပါ။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Lakme Fashion Week တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအဆိုးဝါးဆုံးဗီရိုချွတ်ယွင်းချက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
deepika padukone အားဖြင့်ဗန် heusen ဆင်မြန်း
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်စူပါမော်ဒယ် Carol Gracious သည်ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေစဉ်အဓိကဗီရိုချွတ်ယွင်းမှုတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သူမသည်ရှက်ရွံ့ဖွယ်အကျိုးဆက်များကိုမသိသော sexy ရွှေရောင်နှင့်အဝါရောင်ခွဲခြားထားသည့်တစ်စုံကို ၀ တ်ထားသည်။ သူမရဲ့ထိပ်ကိုသူမနောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်တောင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလဲကျခဲ့တယ်။ Madhur Bhandarkar ၏ဖက်ရှင်တွင် Kangana ၏အဆင်မပြေသည့်အချိန်ကိုသတိရပါ။
Gauhar ၏ Peek-a-boo Exposure
Gauhar Khan သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်၏ထင်ရှားကျော်ကြားသောနာမည်ကျော်စာရင်းဝင်များအနက်တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းသူမသည်လည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Lakme Fashion Week တွင်အဝတ်အထည်ချွတ်ယွင်းချက်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သူမသည်အနက်ရောင်အဖုံးများဖြင့်ရွှေရောင်ကော်စွန်ကိုယ်ထည်ကို ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ သူမသည်သူမ T-zone ကိုပြန်သူမ၏လှည့်အဖြစ်ကသူမ၏ပုဂ္ဂလိကထွက် peep လုပ်သကဲ့သို့အနက်ရောင်ထုပ်, သူမ၏တွင်း။
ဒီမော်ဒယ်လ်သည် Lakme Fashion Week 2014 တွင်သူမ၏အဝါရောင်ရှေ့အစွန်အဖျားထိပ်ရှိပါးနပ်စွာအရောင်တောက်ပနေသည်။ သို့သော်သူမမျှော်လင့်ထားသည့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောဤအခြေအနေမျိုးကိုသူသတိမပြုမိခဲ့ပါ။ သူမသည်သူမ၏တိုကျရိုကျသူမြားကိုဖျောပွခဲ့သညျ၊
ပရိသတ် - ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခြင်း
အခြားဖြစ်နိုင်သည့်ဖက်ရှင်အမှားတစ်ခုကိုပရိသတ်၏ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောအခိုက်အတန့်၌ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီမော်ဒယ်ဟာ Lakme Fashion Week 2015 မှာကြိုးမဲ့လိမ္မော်ရောင်ဝတ်စုံကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သင့်လျော်သောအချိန်တွင်အရိပ်အမြွက်များကိုရခဲ့သည်။ မတ်မတ်ကိုကိုင်ထားသည်။ သို့သော်သူမ၏ braless privates များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှမကယ်နိုင်။
မော်ဒယ်များအပြင်ဘောလီးဝုဒ်မှနာမည်ကြီးများပင် Lakme Fashion Week တွင်ဗီရိုချွတ်ယွင်းချက်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ကြရသည်။ ကျနော်တို့ LFW ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်ကနေနှစ်ခုအဓိက Bollywood ရုပ်ရှင် oops အချိန်လေးရှိသည်။
Chitrangada Singh က
Chitrangada Singh သည် Lakme Fashion Week ဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်းရာသီ ၂၀၁၇ တွင်သူမသည် Neha Agarwal ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်အစွမ်းထက်စစ်သည်တော်မင်းသမီးတစ်ပါးနှင့်တူသည်။ သို့သော်သူမသည်လည်းဖက်ရှင်ကျမှုအခိုက်အတန့်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။ နက်ရှိုင်းစွာထိုးကျနေသောလည်ပင်းအ ၀ တ်အထည်အောက်တွင်သူမသည်ဆီလီကွန်နို့သီးခေါင်းအစောင့်များတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည် ၀ တ်စားဆင်ယင်အောက်မှကြည့်လိုက်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်း၏အကြိုက်ဆုံးဖက်ရှင်ဖြစ်သူ Disha Patani သည်သူမ၏ beau Tiger Shroff သည်အချိန်တန်လျှင်သူမကိုမကယ်တင်ပါကကြီးမားသောဖက်ရှင်အမှားတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ၎င်းကို 'Aww' (သို့မဟုတ်) 'ကယ်တင်ရှင်' အဖြစ်ဟုခေါ်ဆိုပါက၊ ကျားသည် LFW 2017 ရှိချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်တွင်မြင့်မားလွန်းခြင်းမှ Disha ၏နောက်ဆက်တွဲ Manish Malhotra ဝတ်စုံကိုကယ်တင်ရန်ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်တွင်ထခဲ့သည်။
LFW 2018 မှမည်သည့်အရာကိုမဆိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်အစမျှသာဖြစ်သည်။ ကြည့်ကြရအောင်!
ဘယ်အချိန်မှာ c အပိုင်းပြီးနောက်ခါးပတ်ဝတ်ဆင်ရန်
ကျော်ကြားသော manglik နှင့် manglik မဟုတ်သောစုံတွဲများ